Home » Internet » TÉLÉCHARGER BAIBOLY KATOLIKA PDF
Trarantitra ianao, aza an’izany; raha mba mahita fitia eto imasonao aho, dia raiso amin’ny tanako ny zavatra nampanateriko; fa efa nahita ny tavanao aho tahaka ny mahita ny tavan’Andriamanitra, ary efa sitrakao aho. Angamba efa-polo no ho hita ao. Hemdana sy Esbana sy Jitrana ary Kerana. Tononkira Malagasy Sans Code. Indro, eo anoloanao ny taniko; mitoera eo amin’izay tianao. Jehovah anie mbola hanampy zazalahy iray ho ahy koa.
Ny Baiboly Masina sacha74 3. Mba ataovy ato ambanin’ny feko ny tananao; 3 fa hampianianiko amin’i Jehovah, Andriamanitry ny lanitra sy ny tany, ianao, fa tsy haka vady ho an’ny zanako avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita izay iraisako monina ianao; 4 fa any amin’ny tanin-drazako sy amin’ny havako no halehanao haka vady ho an’Isaka zanako. Ary rehefa nitoetra tao aminy andro iray volana Jakoba, 15 dia hoy Labana taminy: Alefaso aho hankany amin’ny fonenako sy ny taniko. Ny lehilahy izay tompon’ireto no nananako anaka; ary hoy koa kwtolika Izao no soa hataonao amiko any amin’izay tany rehetra halehantsika dia lazao aho hoe:
Sambatra aho, fa hataon’ny zanakavavin’ny olona hoe sambatra aho; dia nataony hoe Asera ny anarany. Chapitre 34 1 [Ny nakan’i Sekema an’i Dina sy ny namalian’i Simeona baoboly Levy izany] Dia nivoaka Dina, zanakavavin’i Lea, izay naterany tamin’i Jakoba, mba hizaha ny zazavavy tompon-tany.
Aoka handry aminao ihany ary izy anio alina noho ny dodaiman’ny zanakao. Aoka anie mba tsy ho tezitra ny Tompo, fa mbola hiteny aho: Aza dia mamono ny ainy isika.
A malgache catholique Playlist – Christan chansons de Madagascar. Tsia, fa Saraha vadinao hiteraka zazalahy aminao; ary ny anarany dia hataonao hoe Isaka; ary ny fanekeko haoriko aminy ho fanekena mandrakizay ho an’ny taranany mandimby azy.
Chapitre 8 1 Ary Andriamanitra nahatsiaro an’i Noa mbamin’ny bibi-dia kattolika ary ny biby baibooy rehetra, izay niaranitoetra taminy tao anatin’ny sambo-fiara; ary Andriamanitra nampandeha rivotra eran’ny tany, ka dia nihena ny rano. Tsy azonay atao ny hanome baibolly anabavinay baibolt an’izay lehilahy tsy voafora; fa fahavetavetana aminay izany. Dia tezitra indrindra Kaina, sady nanjombona ny tarehiny. Indro, eo anoloanao ny taniko; mitoera eo amin’izay tianao.
Andriamanitra no hahita izay ondry hatao baboly dorana; dia niara-nandeha izy mianaka. Guide For Fortnite Mobile. Miverena any amin’ny tompovavinao ka miareta izay ataony aminao. Ary Josefa dia bikàna sady tsara tarehy. Aza kagolika vady ho an’ny zanako avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita, izay iraisako monina; 38 fa any amin’ny tranon’ikaky sy any amin’ny havako no halehanao ka hakanao vady any ho an’ny zanako.
Aoka ny tany haniry ahitra sy anana mamoa baigoly hazo fihinam-boa izay mamoa, samy araka ny karazany avy, ka manam-boa ao aminy, eny ambonin’ny tany; dia nisy bainoly. Apetraho eto anatrehan’ny havako sy ny havanao izany, hitsarany antsika roa lahy, 38 Izao roa-polo taona izao no nitoerako tany aminao; ny ondrivavinao sy ny osivavinao tsy mba namotsotra, ary tsy aktolika nihinana ny ondrilahy avy tamin’ny ondrinao aho.
Andeha isika hanao tanàna sy tilikambo ho antsika, ka ny tampony hahatakatra ny lanitra, dia hanao izay hahazoantsika laza, fandrao hiely eny ambonin’ny tany rehetra isika. Manam-be ihany aho, ry rahalahiko; pef ihany ho anao ny anao.
Ireo no zanakalahin’i Jakoba izay naterany tany Mesopotamia. Nous utilisons des cookies pxf vous offrir un grand app store! Tsy mba handringana Aho katolikx ny folo. Aoka kxtolika hanao fianianana isika, dia izahay sy ianao, ary aoka izahay hanao fanekena aminao, 29 fa tsy hanisy ratsy anay ianao, tahaka ny tsy nanendrenay anao akory, sy pdr ny tsy nanaovanay na inona na inona taminao afa-tsy ny soa ihany, fa efa nampandehaninay soa aman-tsara ianao.
Tomoera ho mpitondratena ao an-tranon-drainao mandrapahalehiben’i Sela zanako-lahy fa hoy izy: Ary Jehovah nankasitraka an’i Abela mbamin’ny fanatiny; 5 fa Kaina mbamin’ny fanatiny kosa tsy mba nankasitrahany.
Mbola misy anjara sy lova ho anay va ao an-tranon’ny rainay? Aza ihinananareo ktaolika hazo rehetra amin’ny saha?
Ny fanombohan-kasenao sy ny kofehinao ary iny tehinao eny an-tananao iny. Jehovah Tompo ô, inona bakboly homenao ahy? Olo-marina izahay, fa tsy mba mpisafo tsy akory; 32 roa ambin’ny folo mirahalahy izahay no zanaky ny rainay; tsy ao intsony ny anankiray, ary ny faralahy dia any amin’ny rainay any amin’ny tany Kanana ankehitriny.
Moa hanjaka aminay tokoa va ianao? Ho voaozona anie izay rehetra manozona anao, ary hohasoavina anie izay manisy soa anao. Dia lasa nanontany tamin’i Jehovah izy.
Fa nataon’ny vinantony ho tahaka ny mpanao vazivazy izy. Indro, tamy ilay mpanonofy.
Next post: [ TÉLÉCHARGER BITMOJI SNAP GRATUIT ]